Momba anay - Zhengzhou Onice Technology Co., Ltd.
Kalitao azo antoka sy azo antoka
Ara-dalàna ny vidin'ny mpamatsy
Mitroka be dia be ny soso-kevitr'ireo mpanjifa
Zhengzhou Onice Technology Co., Ltd. dia miorina ao Zhengzhou, faritra afovoan'ny Sina, tanàna manana tantara sy kolontsaina manankarena.
Niorina tamin'ny taona 2019, ny orinasanay dia manana ekipa mpikaroka sy mpivarotra tanora sy manan-talenta, mitandrina ny toe-draharaha isan-karazany manerantany ary manavao hatrany sy manatsara ny fenon'ny tsena.
Ny vokatra lehibe anananay dia ny vokatra Orthodontic nify, vokatra an-tsary X-ray Dental, Unit Dental, compresseur Air Dental, Autoclave, Scalerine Ultrasonic, mpanadio ultrasonic, fanasitranana hazavana amin'ny nify, fakan-tsary am-bava ary haingon-tànana nify, milina fampidirana, motera Endo, Endo Files Apex locator, rafitra fidirana am-pahefana, hazavana fanasitranana LED, haingam-pandeha nify manapotika, tester pulp, Caries Detector, Amalgamator ary Alginate mixer, Jiro nify nateraka. Mandritra izany fotoana izany isika dia afaka manome vokatra marika avy amin'ny 3M, Dentsply, Mani, Saeshin, Kerr, NSK, Coxo, Greatstar, RUNYES, sns.
Mino izahay fa ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy no andiam-piainan'ny orinasa. Ny orinasanay dia manana fifehezana henjana ny kalitaon'ny vokatra, ny fifidianan'ny mpiara-miasa. Ny mpamatsy anay dia manana vidiny mirary sy kalitao azo antoka ary atokisana. Mikasika ny kalitao ho fototra iorenanay, dia mifehy tsara ny fomba rehetra izy ireo manomboka amin'ny fampandrosoana ny vokatra, ny endrika, ny famokarana, ny fanitsiana, ny fitsapana. Mandritra izany fotoana izany dia raisin'izy ireo be ny soso-kevitry ny mpanjifa, hanatsarana ny vokatra efa misy, ary hampiroborobo vokatra vaovao mihamaro hatrany. Nahazo ny fankasitrahan'ny mpanjifa izahay tamin'ny vidiny tsara indrindra sy ny kalitao azo antoka. Ny tambajotram-barotra dia mihamatanjaka hatrany isan'andro isan'andro. Manana ny maso ivoho izahay isaky ny tanàna lehibe eran'i Shina .Ny vokatray rehetra dia malaza any Eropa, Amerika, Moyen Orient, faritra Azia mihoatra ny firenena 30 sy faritra samihafa. Mandritra ny famolavolana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ireo orinasa lehibe maro amin'ireto faritra ireto, dia mitady mpiara-miombon'antoka vaovao bebe kokoa eran'izao tontolo izao izahay. Izay vokatra nify tadiavinao dia aza hadino ny manontany anay fa hiresaka bebe kokoa momba ny fiaraha-miasa mahasoa izahay.
Manantena ny hifandray sy hiara-hiasa amin'ireo namana eran'izao tontolo izao izahay.